Madaxweynaha Xilka ka dhamaaday oo weerar ku ah Guri ka mid ah Musharaxiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha Xilka ka dhamaaday oo weerar ku ah Guri ka...
Madaxweynaha Xilka ka dhamaaday oo weerar ku ah Guri ka mid ah Musharaxiinta
DegDeg: War hadda soo Gaaray Dayniile.com ayaa sheegaya in bartilmaameedka Farmaajo amray in la weeraro uu yahay mid kamid Xarunta ololaha ee Musharrax Xasan Cali Kheyre iyo in weerarkaas lagu soo qabto ama lagu qaarajiyo Sarkaal Ismaaciil Gurey oo Maraykanku tababaray.
Farmaajo wuxuu sheegay Maskaxda ka dambaysa isku duba ridka Ciidanka Musharaxiinta iyo shaxdoodaba in uu leeyahay Taliyihii hore ee Danab Ismaaciil Gurey oo Farmaajo rabitaankiisa markii horeba xilka looga qaaday loona xiray.
Ismaaciil Gurey oo ah Sarkaal Khibrad sare iyo tababarraba ka heysta howl galinta iyo Isku duba ridkooda Maraykana lagu soo tabbaray ayuu hadda Farmaajo u arkaa fallaar wadnaha kaga taagan oo uusan ka gam’i karin.
Weerarka waxaa loo qorsheeyey in Hotel Jazeera Ciidanku marka hore ay la wareegaan, kadibna Kheyre Xaruntiisa la weeraro iyadoo Gaashaanle Ismaaciil Gurey-na la bartilmaameedsanayo.
Gen. Indhacadde, Muusa Suudi iyo Musharaxiinta oo iyaguna ku lammaanan Xildhibaanadda Mucaaradka ah in la weeraro ayey xogtu timaamaysaa, amarka weerarkaas waxaa bixiyey Madaxweynaha uu dhammaaday Muddo xileedkiisa.
Weeradadu in Caawa ay dhacaan ayaa loo badinayaa balse todobaadkan qatartu way taagan tahay.
Warkan wixii kasoo kordha adiga ayaa ugu horreeya cidda ogaato ee IlaJoog.
Previous articleMidoowga Afrika oo sheegay qalalaasaha ka aloosan Muqdisho dhex dhaxaad ka yihiin
Next articleShirkadaha Diyaaradaha Caalamiga ee Soomaliya tagi jiray oo joojiyey Dulimaadka Muqdisho
Wasiirka iskaashiga Sweden oo soo dhoweeyey heshiiskii ay magaalada Muqdisho ku gaareen dowladda iyo midowga musharraxiinta.
Shirka Baydhabo oo Heshiis hordhac ah laga gaaray
Guddiga Farsamada ee dowladda Federaalka, Dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ku shirayey Baydhabo ayaa la sheegay in xal laga gaaray qodobadii la isku...